Global Voices teny Malagasy » Meksika: Manao Amboradara Ho Amin’ny Fandriampahalemana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Aogositra 2012 3:22 GMT 1	 · Mpanoratra Andrea Arzaba Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Lasa Mpiantafiky ny fandriampahalemana ankehitriny any Meksika ny kofehy, ny fanjaitra ary ny lamba. Any amin'ny tanàna maro tahaka an'i Monterrey, Guadalajara ary ny tanànan'i Mexico, nanapa-kevitra ny hanandratra ny feony sy hizara ny heviny mbamin'ny herisetra natrehiny imaso amin'ny alalan'ny ezaka fandraisana anjara iombonana hifanampiana amin'ny fanaovana amboradara ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra.
Ao amin'ny bolongany Yo también quiero opinar  [es], i Liliana Sánchez no nilaza ny nahitany ity tetikasa ity raha nandehandeha tany amin'ny faritra Coyoacan, toerana artistika sady bohemiana manakaiky an'i Mexico City izy:
Tamin'ity indray mitoraka ity, nisy tetikasa nanaitra ny masokoa raha nandehandeha nanavatsava an'i Coyoacan aho. Nisy ny sasany nametaka amboradara tamin'ny mosoara, ary raha nieritreritra aho tamin'ny voalohany fa natao ho an'ny nenibe izy ireny, tsikaritro fa milaza zavatra amin'ny alalan'ny amboradara ry zareo. “Amboradaran'ny fandriampahalemana. Misoara iray isaky ny olona niharam-pahavoazana” no tarigetran'ny vondrona “Red Fountains” (Loharano Mena), izay mikarakara amboradara amin'ny mosoara ahitana ny anarana ny ny zava-nahazo ireo dimy alina maty noho ny ady amin'ny rongony.
Saripika Carlos Ortega, nahazoana alalana. Tsindrio ny sary raha te-hahita sary hafa maro.
Hazavainy ihany koa ny zava-kendren'ny tetikasa voalohany  [es]:
Ny kendren'ny tetikasa, araka ny tenin-dry zareo ihany, “Mandrary ny amboradaran'ny fanantenana sy ny fahatsiarovana.” Rehefa tsy voaisa intsony ny mosoara vita amboradara dia haseho ampahibemaso eny an-dalambe manerana ny firenena izany.
Ao amin'io lahatsoratra io ihany, soratan'i Liliana fa lasa fitaovam-panasitranana ity asa ity  [es] ho an'ny olona izay mandray anjara amin'ny tetikasa:
Hetsika ara-kolontsaina (na tsia) fifankahitana tava amin'ny hafa milanja zava-manahirana itovizana, sy ahiahy iraisana. Miara-mitabataba, mihomehy na malahelo, tsy misy henatra na faneriterena satria mifankahazo resaka aminao ilay eo akaikinao ka lasa fitsaboana ilay tena ilaina.
Ao amin'ny bolongana hafa, + Allá de la Marcha  [es] i Martín Javier Oviedo Hernández no mitantara zava-nitranga nandritra ny asa iraisana ‘Lucha por Amor, Verdad y Justicia’ (Ady ho amin'ny Fitiavana, Marina ary Rariny), tao avaratry ny tanànan'i Monterrey:
Nandritra ny andro mafanafanan'ny volana Mey, nanaitra ny mason'ny mpitazana ka natonina akaiky ny andiam-behivavy manjaitra, mipetraka ary miresaka: tovolahy telo avy any Barcelona, i Aram, i Gabriel ary i William.
- Manao inona ianareo? – hoy ny fanontaniany ireo vehivavy.
- Manao amboradara ho amin'ny fandriampahalemana izahay-, hoy ny famalin'ireo vehivavy niara-niredona.
- Izany hoe marina izany fa anaty ady ianareo? … -
- Tsy hoe anaty ady ihany, alain-dry zareo ny zanakay … -
Reny, anabavy ary havana akaikin'ireo olona nanjavona ireo, ary niara-nanatona ny LUPA (Ady ho amin'ny fitiavana, Marina ary ny Rariny), ka mihaona isaky ny alakamisy amin'ny folo maraina, ao amin'ny kioska Lucila Sabella, ao amin'ny Macroplaza eto Monterrey.
mamarana ny lahatsoratra i Martín manangona ny resaka  [es] ifanaovan'ny vehivavy manao amboradara eo amin'ny kianja lehiben'i Monterrey. Hita ao amin'ny resaka ifanaovan-dry zareo avokoa na fanasana handraisana anjara amin'ny tetikasa ka hatramin'ny fitarainana ny zava-misy iainana ao an-tanàna anjakan'ny herisetra:
- Niantso anay ry zareo, nantsoiny ho ao amina fiangonana iray izahay, nandoa ny vola takalon'ny aina, taorian'ny antso roa dia tsy nisy fifampiantsoana intsony – hoy ny fehin-tenin-dramatoa.
- Tsy misy fandrosony ny famotorana, tahaka ny ankamaroan'ny raharaha, tsy afa-matoky ny fahefana ianao – manaiky daholo ireo.
- Lehilahy maro koa manao amboradara – miresaka ireo, manasa ireo tovolahy telo, izay mihaino tsara:
- [Ny maty no tsy mahatsiaro]…
- Mena ny lokon'ny amboradara, ho fahatsiarovana an'i Don Alejo Garza Tamez, izay maty nandritra ity ady ity, niatrika tamim-pahamendrehana ireo mpamono azy izay nitady haka an-keriny ny fananany [trano sy tany]…
Nandray amboradara i Aram, i Gabriel ary i William, “nandrary” ny tantara henony, milaza fahatsiarovana iray ny teboka tsirairay, dian-tongotra mivaingana. Mamadika ny tsy-finoana ho fanantenana ny manao amboradara ho amin'ny fandriampahalemana. Miofo ho fitiavana ny tahotra sy ny hirifiry.
Mitantara ny hetsika fanaovana amboradara ho amin'ny fandriampahalemana any Guadalajara ny bolongana Red por la Paz en México  [es]:
Misy vondrona iray manao amboradara ho amin'ny fandriampahalemana any Guadalajara. Ao amin'ny Facebook ahitana sarin'olona maro manao amboradara: nenibe manao solomaso, zazavavy sy ny rainy, mpivady. Misy vehivavy amin'ny sezakodia [chaise roulante] aza. Ny sasany mitsagana no manao amboradara, ny hafa mitorovoka eo amin'ny bozaka, ary ny hafa mipetraka amin'ny dabilio. Isan'alahady ry zareo no manao amboradara eo amin'ny zaridaina. Eny no andraisan'izy ireo ny mosoara fotsy, ary amin'ny kofehy mena, no anoratan'izy ireo ny anaran'ireo izay niharan'ny herisetra.
Niitatra any amin'ny tanàna isan-karazany manerantany tahaka ny any Tokyo, Japan  koa ny hetsika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/19/36441/
 Tokyo, Japan: https://www.facebook.com/events/320231251364894/